POPPIN NEW - Page2of 393 -
ကျောင်းဆရာမအား ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
ကျောင်းဆရာမအား ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်က ကျောင်းဆရာမကို သတ်သွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိ RND စက်တင်ဘာ ၁၅(၂၀၁၉) မိုးကောင်းမြို့နယ် ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ နေသူကျောင်းဆရာမတစ်ဦးအသတ်ခံရမှု မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် ပင်ဘောကျေးရွာအုပ်စု ရေတွင်းကုန်း ကျေးရွာ နေကျောင်းဆရာမ၏ မိခင်မှာ မတ်လ …
ဘယ်​​သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်​စာမတိုက်​ပါနှင့်​.. ချစ်​ခင်​၍လည်း နောက်​ဘဝပြန်​​တွေ့ပါရ​စေ ဆုမ​တောင်းကြပါနဲ့.. ကံ ကံ၏အကျိုးရယ်​ သံသရာဆိုတာကိုရယ်​ ယုံကြည်​သက်​ဝင်​ကြပါ​စေ။ ကံ မှန်​ပါက အကျိုး​ပေးသန်​၏ ပြုသူအသစ်​ ဖြစ်​သူအ​ဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုး​ပေး​တွေပါ။ ပဋာစာရီ လင်​ကို ​မြွေကိုက်​ သားကြီး​ ​ရေနစ်​ သားငယ်​ စွန်​ချီ မိဘ နှစ်​ပါးနှင့်​ အကိုကြီး ​လေပြင်း …
သွားလေသူနဲ့ ကျန်ရစ်သူ နှစ်ဦးလုံးကိုယ်စား ကြေကွဲရပါတယ်…ကိုယ်ချင်းလဲစာမိပါတယ်…. လူနာ မော်လမြိုင်ဆေးရုံအရောက်သေဆုံးသွားပါပြီး။ 13.9.2019.နံနက်.၁၀:၃၅.အချိန် မုဒုံမြို့နယ် အဘစ်ရွာ လမ်ဝ ဆိုင်ကယါ နှင့် ကား ချိတ် ဒါဏ်ရာရ အမျိုးသမီး စိုးရိမ်ရ လူနာကို သံဖြူဇရပ်မြို့ဆေးရုံသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း အခမဲ့လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ကိုမင်းသား အကူအညီဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးစဉ် ဦးကျော်ဝင်း AB အခမဲ့ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် နာရေးကူညီမှုအသင်း …
အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ အရမ်းအတင်းရဲ နေကြပါတယ်(ရုပ်သံ)ကြည့်ရန်
အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ…. အရမ်းအတင်းရဲ နေကြပါတယ်…. 11-9-19 မနက်(၈:၁၀) မိနစ် ချိန် မန္တလေး မြို့ ၃၃ လမ်း ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်း ရှိ ဝေဝေ ခေါက်ဆွဲဆိုင် မှာ ခေါက်ဆွဲ ထိုင်စားနေတဲ့ချိန် ထိုင်ခုံဘေးနားချထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်အဖြူရောင် (Charles & Keith)တလုံး လုယူသွားပါသည် တရုတ်ဆိုင်ကယ် နံပါတ်(၂၉၉၁၉) ဖြင့် …
အခုလတ်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မုဒိန်းရုပ်ရှင် အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်လိုက် တဲ့မောင်မောင်အေး
အခုလတ်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မုဒိန်းရုပ်ရှင် အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်လိုက် တဲ့မောင်မောင်အေး ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… ပြည်သူချစ် MCတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးမောင်မောင်အေးကတော့ အခုထိ အချစ်ခံနေရဆဲပါ ။ ပရဟိတ အလုပ်တွေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ ကိုမောင်အေးတစ်ယောက် လတ်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မုဒိန်းရုပ်ရှင် အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ မောင်မောင်အေးက ” ပြောမရဘူး… ဒီကားပေါက်ရင် မုဒိန်းကောင် ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းလိုက်တွေဆက်ရိုက်ပြီး နောင်တချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ …
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ပေါင်။ခြေသလုံး အကြောတောင့်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါကမဲဇလီ ရွက်ပြုတ် ရေ ဖြင့်ကုပါ
လူတိုင်းသိကြသည်။တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ည (၁၂)နာရီ အဖူး ခူး။ ဆေးပေါင်းခလို့ သုပ်စားတဲ့အပင်။ထင်ရှားသည်။အလွန်ပေါပါသည်။တောင်းလို့ လွယ်သည် ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ရောဂါများမှာ တဦးနှင့်တဦး မတူကြပါ။ ရောဂါဖြစ်ပြီး ပေါင်။ခြေသလုံး မှ အကြော တောင့်တင်းကာ အိပ်ရာမှထခက်။လမ်းမလျှောက် နိုင် ။မိမိ နှင့် ဇနီး ရောဂါဖြစ်တော့ရာ။ အချိန်တို ကြပ်ထုပ်သုံး ရက်။မသက်သာ၍ တနာရီ၇၀၀၀ ကျပ်။ သုံးရက် ကြပ် …
မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့ …….
အရွယ်ရောက်လို့.. .ရည်းစားထားတာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး… …လူရွေးမှားရင်တော့ မင်းအပြစ်ပဲ… ဒီမှာ…ညီမလေး ကိုယ့်ကို တစ်ကယ်မချစ်တဲ့လူအတွက် ပေးဆပ်နေရတာ တန်ရဲ့လား…?ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုဆက်ချစ်နေရင်ရော…အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား… ? ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်…နာကျင်ခံစားနေရတာတွေကိုယ်ပေးသလို ပြန်ရလာနိုးနိုးနဲ့ မျော်လင့်နေရတာတွေကဖြစ်သင့်သလား သေချာစဉ်းစားပါအုံး။ ညီမလေး သိထားပါ… …တစ်ကယ့်အချစ်စစ်ကကိုယ်က ပေးမှပြန်ရတာ မဟုတ်ဘူး…ကိုယ်က မပေးရင်တောင် သူ့ဘက်က ပေးချင်နေတာမျိုး… ညီမလေး…တန်ဖိုးထားပြီးကိုးကွယ်နေတဲ့…အချစ်ဆိုတာ…သူ့အတွက်…ပျံကျဈေးတန်းမှာ ရောင်းနေတဲ့…မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲလောက်တောင် …